The ụgbọ elu na-adịghị cathing na ife efe mkpọda.
The ụgbọ elu na-adịghị cathing na ife efe mkpọda. 3 afọ 3 ọnwa gara aga #479
Enwetara m n'ezie 737 164 isi base pack na B787 isi mkpọ na mgbe m na-efe na m na-achọpụta na ọ na-adịghị na-enweta na mgbago. Ọ na-akpaghị aka na-agba ọsọ ma ọ naghị ejide ya.
The ụgbọ elu na-adịghị cathing na ife efe mkpọda. 3 afọ 3 ọnwa gara aga #482
Ezi ụtụtụ (ezigbo ụzụ n'ehihie ebe a na Texas).
Enwere m ike ịgbapụ B747-400LCF ọtụtụ oge, ma achọpụtala m na nke kachasị nke ụgbọelu m. Amaghị m ihe kpatara nke a, n'eziokwu. Enwere m ike ịbụ ezigbo mma banyere "na-efegharị bọl" aka, ma na-eme ihe n'eziokwu ... Agaghị m atụkwasị obi na kọmputa iji mee ya maka m lol m maara na QW757 ga-eme ya, ma ọ na-eme n'eziokwu na-eme ka m nwee ụjọ lol
The ụgbọ elu na-adịghị cathing na ife efe mkpọda. 3 afọ 3 ọnwa gara aga #497
Jide n'aka na mgbe itinye "Mbata" na, ị gbanyụọ "ALT HLD"
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: Gh0stRider203, JanneAir15
The ụgbọ elu na-adịghị cathing na ife efe mkpọda. 3 afọ 3 ọnwa gara aga #500
Ugbu a, amaara m ihe mere m ji nwee nsogbu na Project Airbus A380. Ana m ekele gị maka inye aka ọzọ Tonny0909!
The ụgbọ elu na-adịghị cathing na ife efe mkpọda. 3 afọ 3 ọnwa gara aga #518
Daalụ maka aro gị ma nsogbu m lara n'iyi mgbe m nwetara sp2 na usoro m.
The ụgbọ elu na-adịghị cathing na ife efe mkpọda. 3 afọ 3 ọnwa gara aga #519
Enwere m nsogbu a n'ihu na ụzọ kachasị mma isi mesoo ya bụ ịkwado onye nwe obodo na mbụ ma n'otu uzo ma ọ bụ otu nkwụsị site na ọgba ọsọ mana obere ala. Ọzọkwa ihe nwere ike inye aka bụ ma ọ bụrụ ozugbo ị guzosie ike na ILS pịa nso jide. gbalịa ndị a ma ọ bụrụ na ha adịghị eche nche na youtube ma ọ bụ n'ebe ọzọ. Imirikiti ebe ndị dị na gburugburu 2000-2500ft dịka ebe kacha mma ịnọ. Nye ha ihe niile gara aga.